बेल्ट समय - यो पनि कैंषफ्ट र क्रैन्कशाफ्ट सहित सबै मोटर शाफ्ट को सञ्चालन सिङ्क्रोनाइज एउटा सानो विवरण हो। यो स्पेयर भाग कारण 60 हजार किलोमिटर को उच्च लोड रिजर्व अन्तर्गत जो आफ्नो अपरेटिङ जीवन, उच्च टिकाउ रबर बनेको छ। अभ्यास शो रूपमा, गाडी मा पनि समय बेल्ट तल हरेक5वर्ष खण्डन। तथापि, यो भाग अघि खण्डन सम्भव छ। तपाईं तेल को सतह निशान मा आफैलाई यति भने, तपाईंलाई थाहा: कार आवश्यक भएको समय बेल्ट को प्रतिस्थापन। सेवा केन्द्र मा यस्तो काम को मूल्य2हजार rubles गर्न 1600 देखि छ। तथापि, तपाईं नि: शुल्क समय र पैसा बचत गर्न ठूलो इच्छा केही घण्टा छ भने, सम्पूर्ण प्रक्रिया बाहिर स्वतन्त्र लगे गर्न सकिन्छ। यस लेखमा हामी कुराहरू "शेवरलेट Lacetti" मा गरिन्छ कसरी समय बेल्ट प्रतिस्थापन हेर्न हुनेछ।
तपाईंलाई सुरू गर्नु अघि, तपाईं एक हेर्ने प्वाल मा कार लिनु आवश्यक छ। कि पछि तपाईं यसलाई एक बेल्ट हटाउन र स्थापना को समयमा गरिएका थिएन कि स्थिति BMT मा सापट लक गर्नुपर्छ। यो गर्न, हामी लेबल पर्दाफास र "शेवरलेट" 5th गियर समावेश गर्नुहोस्। अर्को, तल्ला गर्न ब्रेक पेडल मा क्लिक गर्नुहोस् र यो स्थितिमा यसलाई ठीक। आवश्यक छ भने, तपाईं मित्र वा मित्र कल गर्न सक्नुहुन्छ।
को "शेवरलेट Lacetti" मा समय बेल्ट प्रतिस्थापन गर्न कठिनाइ बिना भयो, हामी वस्तु क्रैन्कशाफ्ट चरखी धारण गर्न आवश्यक छ।
निकाल्दै दुवै शाखा भागहरु विशेष सीप र ज्ञान आवश्यक छ। तपाईं यो पहिलो पटक भने समर्थन रोलर को पहिलो प्राप्त गर्नुहोस्। पछि सेवन कैंषफ्ट चरखी मा यो स्लाइड गर्नुहोस्। अर्को, यो चरखी सापट आउटलेट मा ठाँउ हो। सही शाखा पंप को एक चरखी मा रोलर लागि आयोजित गरिनेछ जब, त्यो बाँया संग पूरा हुनेछ। बेल्ट पाश सफासँग यो वस्तुमा सज्जित हुनुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै कुनै पनि सुविधाजनक विधि द्वारा बेल्ट सुत्छन्। पङ्क्तिबद्ध किनारा पालना समय संयन्त्र एक चरखी किनारा संग।
अर्को चरण मा समय बेल्ट को प्रतिस्थापन "शेवरलेट Lacetti" को क्रैन्कशाफ्ट 360 डिग्री खोल्दै सँगसँगै गर्न। कि पहिले, तपाईं मूल भागहरु को स्थान चिनो गर्न आवश्यक छ। लेबल नै हो भने, तपाईं समय बेल्ट को अन्तिम तनाव गर्नुपर्छ।
अन्तिम चरण मा हामीले नयाँ भाग को तनाव जाँच र इन्जिन सुरु गर्नुहोस्। उहाँले 1-2 मिनेट को लागि काम गरेपछि बन्द ज्वलन बारी र त्यसपछि बेल्ट को राज्य मा हेर्न। यसलाई कमजोर छ भने, कारखाना आफ्नो स्थिति समायोजन र फेरि इन्जिन सुरु गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया पछि खण्डका विवरण भने समय अपरिवर्तित रहन्छ, यो समय बेल्ट गर्न "शेवरलेट Lacetti" को प्रतिस्थापन सफल भयो भन्ने संकेत गर्छ। निस्क्रियगर्दै समयमा संयन्त्र को सञ्चालन गर्न पनि ध्यान। यो बेल्ट विशेषता रोते ध्वनि प्रकाशित छ अस्वीकार्य छ। र खण्डका कुनै पनि परिणाम दिन छैन भने, मात्र यो स्थिति बाहिर मात्र तरिका पुन: प्रतिस्थापन गरिनेछ समय बेल्ट गर्न "शेवरलेट Lacetti" को। तसर्थ, मात्र गुणस्तर भागहरु खरीद।
सोभियत GAZ-22 ( "वोल्गा") वर्णन, विनिर्देशों, फोटो
रडार डिटेक्टरों को विकल्प
ग्लास मा पुस्तक फिलिम
"Varfeyse" मा एउटा लेख कसरी जुटाउने? शुरुआती लागि सुझाव
Padding छत Alcantara: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
घरमा चीरना कपाल: आधुनिक सुविधाहरु संग किफायती हेरविचार
Dzheyms Kottak: रक र रोल सधैंभरि। समूह "Kottak" र "बिच्छुओं"
"Iblisskoe राज्य" - यो के हो? कानून "Iblisskogo राज्य"
अलार्म "Sherkhan Magikar 5" - प्रयोग, समायोजन र समीक्षा लागि निर्देशन
ब्राड पीट कसरी पुरानो छ: हलिउड को रहस्य
गोली पीसी वा कुनै बीच चयन गरियो।
क्राउन प्रिन्स रुडोल्फ: जीवनी